Hojjettoota manneen murtii 360 irratti tarkaanfiin fudhatame – Fana Broadcasting Corporate
Hojjettoota manneen murtii 360 irratti tarkaanfiin fudhatame
Finfinnee, Adoolessa 8,2011(FBC)- Abbootiin seeraa rakkoo naamusaa cimaa qaban 21 hojiirra gageeffaman.
Caffeen Oromiyaa yaa’ii idilee 10ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaa kaleessa Adoolessa 7,2011 eegale har’a guyyaa lammaffaaf itti fufeera.
Preezidaantiin Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaan gabaasa mana hojii isaanii Caffeef dhiyeessaniin, tajaajila haqaa mijataa gochuuf karoorri riifoormii xinxala irratti hundaa’e hojiirra ooluu kaasaniiru.
Abbootii seeraa gaggeeffaman dabalatee hojjettoota 360 irratti tarkaanfiin bulchiinsaa fudhatameera.
Tajaajila manneen murtiin kennaman irratti itti quufiinsi maamilaa akka waliigalaatti %53 fi amantaan ummataa immoo %55 ta’ee argameera jedhan.
Dhimmoonni 4,701 tajaajila viidiyoo koonfiransiin keessummeessuun danda’ameera.
Kana malees, lammiin mirga heeraan kennameefitti akka fayyadamuuf namoota 18,844f tajaajilli turjumaanaa kennamuusaa ibsan.
Manneen Murtii horataalee muraasa jirutti qusannaan, sirnaa fi seera eeganii akka fayyadamaniif hojii to’annoo gaggeeffamaa tureen 11 keessatti Birrii miiliyoonni 1.34 seeraan ala qisaasamuun baramee, gara kaaznaa mootummaatti akka deebi’u taasifameera.
Gama biraatin, tajaajila abbaa seerummaa bara kana kenname irraa Birrii miiliyoonni 113.6 mootummaaf galii ta’eera.
Obbo Dasaan naamusa abbootii seeraa mirkaneessuuf hojii hojjetameen, abbootiin seeraa rakkoo naamusaa cimaa agarsiisan 21 hojiirra gaggeeffamaniiru jedhan.